Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: Word Tips (#1): Unicode Characters အလွယ်ရိုက်နည်း တစ်ခု
Word Tips (#1): Unicode Characters အလွယ်ရိုက်နည်း တစ်ခု
ခေါင်းစဉ်က Word Tips ပါ
Microsoft Word သုံးတဲ့ user တွေ အတွက် Tip လေးတွေ မျှချင်ပါတယ် (ဂျီမေး၊ ဂျီတော့၊ အီးမေး များနှင့် မဆိုင်ပါခင်ဗျား)
*** အခုပြောပြမည့် နည်းက Alt key + Numpad Digit သုံးပြီး ASCII Character တွေ အလွယ်ရိုက်သွင်းတဲ့ နည်း နှင့် ဆင်ပါတယ်။
ကီးဘုတ် ကြောင်သွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
Unicode Character တစ်လုံးလုံးကို ကီးဘုတ်ကနေ ရိုက်ထည့်ဘို့ အဆင်မပြေတဲ့ အခါ ဒီနည်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်
ဥပမာ။ ကျနော် အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် "၌" ဆိုတဲ့ စာလုံး ရိုက်ထည့်လို့ မရဘူး ဆိုပါတော့
( ၌ ) ရဲ့ ယူနီကုတ် နံပတ်ကို သိရင် Character Map သုံးဘို့ မလိုပဲ တန်းရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ( ၌ ) ရဲ့ ယူနီကုတ် နံပတ်က ( 104C ) ဆိုပါစို့။ ( ၌ ) ကို ရိုက်ထည့်မည့် နေရာမှာ 104C ကို ရိုက် ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Alt ကီးနဲ့ X ကီးကို တွဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ စာရွက်ပေါ်မှာ 104C ပျောက်သွားပြီး ၌ လို့ ပေါ်သွားပါမယ်။
လုပ်ချင်တာက ( ၌ ) ရိုက်ချင်တယ်
104C လို့ ရိုက်ပါ
Alt ကီး နဲ့ X ကီး ကို တွဲနှိပ်ပါ။ (* C အနောက်မှာ ကာဆာ (Cursor) ကျနေစဉ် ဖြစ်ရပါမယ်)
၌ လို့ ပေါ်သွားပါပြီ။
နောက် တစ်ခု ထပ် ပြောပြချင်တာက... သူ့ရဲ့ ပြောင်းပြန်ပေါ့
( က ) ရဲ့ ယူနီကုတ် နံပတ် ကို သိချင်တယ် ထားပါတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လွယ်ပါတယ် ခုနက ကီးတွဲ ကို နှိပ်ရုံပဲ။ (Alt ကီး နဲ့ X ကီး ကို တွဲနှိပ်ရန်ပါ။) က နောက်မှာ ကာဆာချပါ။ Alt ကီး နဲ့ X ကီး ကို တွဲနှိပ်ပါ။ ( က ) ကနေ သူရဲ့ ယူနီကုတ် တန်ဘိုး ဖြစ်သော 1000 ဟု ပြောင်းလဲ သွားပါမယ်။
လုပ်ချင်တာက ( ၌ ) ရဲ့ ယူနီကုတ်တန်ဘိုးကို သိချင်တယ်
၌ လို့ ရိုက်ပါ
Alt ကီး နဲ့ X ကီး ကို တွဲနှိပ်ပါ။ (* ၌ အနောက်မှာ ကာဆာ (Cursor) ကျနေစဉ် ဖြစ်ရပါမယ်)
104C လို့ ပေါ်သွားပါပြီ။
စာလုံးသိပါလျက် ယူနီကုတ်နံပတ် တန်းသိချင်တဲ့ အခါ Word user တွေအတွက် အသုံးတည့်မည့် နည်းလေးပါ။
ဒီတစ်ခေါက် ကျနော် ပြောချင်တဲ့ Word Tip က ဒါလေးပါပဲ...
အောက်မှာ ဇော်ဂျီ စာလုံးများနှင့် သူတို့၏ ယူနီကုတ် တန်ဘိုးများကို ဖော်ပြထားပါတယ် အလွယ်ကြည့် ဇယားပါ။
image source: my.wikipedia.org
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/ueUS3oq
Posted by Ko Gyii at 5:55 PM
Labels: Microsoft , Office , Tip , Unicode , Word , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Word Tips (# 5): Quick Part Gallery ၏ ဒုတိယပိုင်း ...
Word Tips (# 4): Quick Part Gallery
Word Tips (# 3): Word ထဲမှာ ဂဏန်းတွက်မယ် အပိုင်း-၁...
Word Tips (# 2): Filler Text အကြောင်း
Word Tips (#1): Unicode Characters အလွယ်ရိုက်နည်း ...